Nea ɛbɛba Egypt ne Etiopia so ho sɛnkyerɛnne (1-6)
20 Afe a Asiria hene Sargon somaa Tartan* kɔɔ Asdod+ no, ɔne Asdod koe, na ɔfaa kurow no.+ 2 Saa bere no, Yehowa nam Amus ba Yesaia+ so kae sɛ: “Kɔ na koyi awerɛhow ntama* no fi w’asen, na worɔw wo nan ase mpaboa.” Ɔyɛɛ saa, na ɔde adagyaw nantewee.* Ná ɔnhyɛ mpaboa. 3 Na Yehowa kae sɛ: “Sɛnea m’akoa Yesaia de adagyaw nantew mfe abiɛsa a wanhyɛ mpaboa na ɔde yɛɛ sɛnkyerɛnne+ ne kɔkɔbɔ maa Egypt+ ne Etiopia+ no, 4 saa ara na Asiria hene de wɔn a wɔakyere wɔn afi Egypt,+ ne Etiopiafo a wɔatu wɔn afi wɔn man mu, mmerante ne nkwakoraa nyinaa bɛkɔ wɔ adagyaw mu. Wɔrenhyɛ mpaboa, na wɔn to ho begu hɔ, na Egypt bɛda adagyaw.* 5 Na wɔbɛbɔ hu na wɔn ani awu, Etiopia a wɔn ani da no so ne Egypt a wɔde hoahoa wɔn ho no nti.* 6 Saa da no, nnipa a wɔte mpoano asaase yi so bɛka sɛ, ‘Monhwɛ nea ato wɔn a yɛde yɛn ani too wɔn so no, wɔn a yeguan kɔtoaa wɔn sɛ wonnye yɛn mfi Asiria hene nsam no! Afei yɛbɛyɛ dɛn aguan?’”
^ Anaa “asraafo panyin.”
^ Anaa “na ɔnantewee a na ɔnhyɛ ataade papa biara.”
^ Anaa “ani bewu.”
^ Anaa “Egypt anuonyam a ɛyɛ wɔn fɛ no nti.”